Tun Tun's Photo Diary: Batam, Indonesia (2 Days 1 Night) #2
အဲဒီ အိမ်ပုလေးတွေ နားမှာ အခုလို ရဟတ်တွေ ချားတွေ ရှိတယ်။ စီးတဲ့သူလဲ မရှိပါဘူး။ ပိတ်ပဲထားတာလား မသိဘူး။ နောက်ထပ်တွေ.တာက ဟိုဘက်ဒီဘက် ကို ကြိုးတဲ့ တွဲလောင်း စီးပြီးကူးတဲ့ ဟာပါ။ ပြီးတော့ ပြိုင်ကား အသေးစား မောင်းတဲ့ နေရာပါ။ အချိန်ခဏပဲ ပေးလို. ဘာမှ မစီးခဲ့ပါဘူး။ ကြည့်ရုံ ဓါတ်ပုံ ရိုက်ရုံလောက်ပါပဲ။ နေကလဲ အရမ်းပူတော့ ဘာမှ လုပ်ချင်စိတ်မရှိပါဘူး။ ဘက်စ်ကားပေါ် ထိုင်နေတာမှ အဲယားကွန်းနဲ. အေးအေးဆေးဆေး ရှိဦးမယ်။
Near the miniature houses, there is something like playground where Ferris wheel and some rides can be found. But there was no kid playing there and it didn't look operating. On the other side, I saw some activities like Go-Karting and Flying fox. Our tour didn't give enough time to do these activities even thought they did it was too hot to play at that time.
အဲဒီ ကစားတဲ့နေရာနဲ. မလှမ်းမကမ်းမှာ Golden Beach ဆိုပြီး လမ်းညွန်ထားတာတွေ.လို. ပင်လယ်ကမ်းခြေ အမိုက်စား လေးများ ဖြစ်မလားလို.၊ အခု ပုံထဲမှာ မြင်ရတဲ့ ကလေးတွေေ၇ဆော့ နေတဲ့နေ၇ာက Golden Beach ပါတဲ့။ မြန်မာလို ခေါ်ရရင်တော့ အိုင်၊ မြောင်း လိုပုံစံ မျိုးဟာပါ။ ရေက မကြည် ၀ါနေလို. Golden Beach လို. ခေါ်တာဖြစ်မယ်။
Next, we went to see "Golden Beach" and I thought it will going to be an awesome beach. Onacontrary, as you can see in the photo the "Golden Beach" is the one with muddy water. May be because of the unclear yellowish color of the water, it is named "Golden Beach". :)
Golden Beach ကနေ နောက်ထပ် သွားတဲ့နေရာကလဲ တရုတ် ဘုရားကျောင်းပါပဲ။ ခရီးစဉ် တခုကပြီးတော့မယ် အခုထိ စိတ်ကြိုက်တွေ.တဲ့ နေရာ တခုမှ မရောက်သေးဘူး။
After visiting Golden Beach, the bus brought us to another Chinese temple. So far, none of these places could make me feel excited about today trip, it was almost end of the day tour.
ဒီတရုတ်ဘုံကျောင်းပြီးတော့ ကျွန်တော်တို.ကို ပါတိတ် အထည်တွေေ၇ာင်းတဲ့ဆိုင် ၊ Factory outlet အကျီဆိုင်တွေ လိုက်ပို.ပါတယ်။ အဲဒါတွေ အပြီးမှာတော့ ကနေ.တနေ.တာအတွက် နောက်ဆုံး နေရာ တခုဖြစ်တဲ့ Batam မြို.က Shopping Mall တခုမှာ ၁နာရီခွဲလောက် အချိန်ပေးပြီ လည်ခိုင်းပါတယ်။ Mall နာမည်တောင် မမှတ်မတော့ဘူး။ KFC တွေ.တာနဲ. ကြက်ကြော် နဲ. ထမင်း တွဲရောင်းတဲ့ Set meal ကို မှာစားခဲ့တယ်။ မနက်ကတည်း အင်ဒိုနီးရှားကို ရောက်နေတာ အခုမှ ပဲ အင်ဒို ပိုက်ဆံ စသုံးရတာ။ စင်ကာပူ $ နဲ. exchange rate က အရမ်းကွာတော့ (S$1=9000 Rupiah) ဆိုင်တွေက ဈေးနူန်းတွေ ကြည့်လိုက်ရင် ဈေးကြီးတယ်ပဲ ထင်နေတာ။ ဥပမာ KFC မှာ set meal တခုစားရင်ကို သောင်းနဲ.ချီပြီးပေးရတယ်ပေါ့။ အမှန်သေချာတွက်ကြည့်လိုက်တော့မှ ဈေးသိပ်မကြီးမှန်း သိတယ်။ ညလဲ ကိုယ့်ဖာသာ ကိုယ် Hotel ကနေ ဘယ်မှ သွားလည်ချင်စိတ်မရှိတော့လို. Mall ရောက်တုန်း ညကျရင်စားဖို. အအေးနဲ. မုန်. ကို Supermarket မှာ တခါတည်းဝယ်ခဲ့တယ်။ Hotel နားမှာလဲ ဘာမှ မရှိဘူးလေ။ မြို.လယ်ခေါင် က Hotel မှာ တည်းရမယ်ဆိုရင်တော့ အနီးအနား ညဈေးတွေ ဘာတွေ သွားကြည့်လို.ရသေးတယ်။ အခု Hotel နေရာ က ဘာနဲ.မှ မနီးပါဘူး။
After visiting Chinese temple, we visited places like Bitik shop, souvenir shop and Factory outlet shop. After all this, the last stop of the tour was visiting to one of the biggest shopping malls in town. I found KFC stall in the Mall and ate Fried kitchen set meal with rice and it was the first time I used Indonesia Rupiah. Compared to Singapore currency (S$1=9000 Rupiah) , all the price tags in Indonesia made me feel expensive due to big number. It took me some times to calculate to figure out the actual price in Singapore currency. As I didn't want to explore anything after place, I bought some snacks and drinks for dinner from the supermaket.
တချို. Hotel မပြန်သေးပဲ massage လုပ်ချင်တဲ့သူတွေကို massage လုပ်တဲ့နေရာမှာ ချထားခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ Hotel ကို ပြန်ပြီး Check-in လုပ်ပါတယ်။ အခုမှ Hotel ကိုရောက်တာပါ။ ရောက်ရောက်ချင်း မိုးမချုပ်ခင် ရေကူးကန်တွေ.လို. ရေ ဆင်းကူးခဲ့ပါတယ်။ ရေကူးကန်ထဲမှာ မြန်မာ ဧည့်သည်တွေ ရေဆော့နေတာတွေ.ခဲ့တယ်။ သူတို.လဲ Groupon ကနေ ၀ယ်လာကြတယ်ထင်ပါတယ်။း)
Batam ရဲ. တရက်တာ ခရီးစဉ် ဒီလိုနဲ. ပြီးဆုံးခဲ့ပါတယ်။
Finally, the bus sent us to the hotel. After Check-in foraroom, I went to swim at hotel swimming pool before getting dark. There were some Burmese swimming at the pool. I think they were also bought same Groupon deal. That is how I spent my first day in Batam.
Chairs made of car tyres.
နောက်နေ.မနက်မိုးလင်းတော့ Hotel က ကျွေးတဲ့ မနက်စာ စားပြီး Hotel အနီးအနားကို လမ်းလျှောက်ထွက်ကြည့်ပါတယ်။ Hotel နားမှာ တိရစ္ဆာန် တချို.လှောင်အိမ်ထဲမှာ ထည့်ထားတဲ့ နေရာကို ရောက်သွားတယ်။ စွန်၊ ယုန် နဲ. မျောက် လောက်ပါပဲ။ စွန်ရဲ. ခြေထောက်တစ်ဖက် ကို ကြိုးတိုတိုလေး နဲ. ချီထားတာ မြင်လို.တောင်မကောင်းဘူး။ စွန်ကို ဓါတ်ပုံရိုက်နေတုန်း ကလေး အော်သံ ကြားလို. လှည့်ကြည့်လိုက်တော့ လှောင်အိမ်ထဲက မျောက်တွေက အပြင်က ကလေးရဲ. ဆံပင်တွေ ၊ အကျီတွေ ဆွဲ နေတာပါ။ ကလေးအဖေ လဲ ပျာယာ ခတ်ပြီး သူ. သမီးကို အပြင်ကနေ ပြန်ဆွဲပါတယ်။ မျောက်တွေလဲ လှောင်အိမ်မှာ နေရတာ မပျော်လို. စိတ်တိုထယ်ထင်ပါတယ်။ ကလေး ဘာမှ မဖြစ်ပါဘူး။ လန်.သွားရုံလောက်ပါပဲ။
There was nothing to do on the second day. Eat Hotel breakfast and explore near the hotel. I spottedaplace where animals such as Eagle, rabbits and monkeys are kept inacage. Monkeys look angry and the eagle is tied by very short string. How Sad? While I was taking photo, one of the kid was attacked by the angry monkeys that they pulled the kid's hair and cloth from the cage. The kid shout in fear and her father manage to pull her back.
ံHotel နားမှာ တခြား ဘာမှ သွားစရာမရှိတော့ အခန်းထဲ ပြန်ပြီး check-out လုပ်ရမယ့် အချိန်ကို ထိုင်စောင့်နေခဲ့တယ်။ ဒါကတော့ Hotel အခန်းကနေ အောက်ကို လှမ်းရိုက်ထားတဲ့ ပုံတွေပါ။
Tookafew photos from the hotel room before check-out.
မနက် ၁၀လောက် အခန်းကို check-out လုပ်ပြီး။ Bus လာအခေါ်ကို စောင့်ရပါတယ်။ အခု Hotel ကနေ သင်္ဘောဆိပ် ကို သွားတဲ့ Bus ကားခ ကလဲ package ထဲမှာ ပါပြီးသားပါ။ Bus နဲ. သဘောင်္စီးရမည့် နေရာရောက်သွားတယ်။ လာတုန်းက သဘောင်္ဆိပ်နဲ. နေရာမတူပါဘူး။ ဒီသင်္ဘောဆိပ် က ပိုပြီး ကြီးပါတယ်။ အနီးနားမှာလဲ Shopping Mall ကြီးရှိပါတယ်။ ကျွန်တော်စီးမည့် သင်္ဘော ထွက်ဖို. အချိန် ၂ နာ၇ီလောက် လိုသေးတော့၊ မျက်နှာချင်းဆိုင် က Shopping Mall ဆီကို လမ်းလျှောက်သွားခဲ့ပါတယ်။ သဘောင်္ဆိပ်နဲ. Mall ကို တံတားနဲ. ဆက်ထားပါတယ်။
According to the itinerary, the tour bus from yesterday picked us up from the hotel and sent to ferry terminal. The terminal is different from the one we arrived yesterday. This is the big one. Nearby, there isabig shopping mall which is linked byabridge from the terminal. Since I still had2more hours to kill, I walked down to the shopping mall to takealook.
စင်ကာပူက Mall တွေလိုပဲ သန်.သန်.ရှင်းရှင်းနဲ. ဆိုင်တွေလဲ အများကြီးရှိပါတယ်။ စိတ်ကြိုက်တွေ.လို. ပါတိတ် ရှပ်အင်္ကျီနဲ. ဦးထုတ် ၀ယ်လာခဲ့သေးတယ်။
Like the shopping mall from Singapore, it is quite big and clean. I bought my favorite Batik shirt and hat for myself.
နေ.လည်စာ စားချိန်လဲ ဖြစ်နေတော့ Mall ထဲမှာပဲ Ayam Penyet (အင်ဒို ကြက်ကြော်ထမင်း) စားခဲ့တယ်။
Ayam Penyet for lunch.
KFC Christmas Tree
Mall မှာ ဈေးဝယ်၊ နေ.လည်စာ စားပြီး သဘောင်္စီးပြီး စင်ကာပူ ပြန်လာခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော်အမြင်ပြောရရင်တော့ အခု Batam ခရီးစဉ်ကတော်တော်ကို ပျင်းစရာ ကောင်းတဲ့ ခရီးပါ။ စင်ကာပူကလူတွေ သဘောကျတယ်ဆိုတာက သူတို.က Batam ရောက်ရင် Seafood ဆိုင်တွေသွားစား၊ Massage တွေသွား ပြီး ဇိမ်ခံကျတာပါ။ အဲလိုတွေ လုပ်ဖို. အစီအစဉ်မရှိဘူး ဆိုရင်တော့ Batam သွားရတာ တော်တော်ပျင်းဖို.ကောင်းပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်တော်တည်းတဲ့ Hotel နေရာ မကောင်းတာလဲ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
After shopping and dinning at the mall, it was time to go back Singapore. In my opinion, this trip is the most boring trip I have ever made. It may beagreat place for people who like to spend money to enjoy massage and seafood. As I not this type of traveler, it is notafascinating place for me to visit. It is also possible that the hotel that I stayed is badly located (Not near to any of the attraction).
ကဲ Batam2Days 1 Night trip က ဒီလောက်ပါပဲ။ နောက်ထပ် တင်မည့် ပို.စ်တွေလဲ လာပြီး ဖတ်ပါဦး။း)
Big Cruise at Harbour Front Center, Singapore
That's all for my Batam trip, please come and read my future posts. :)
at 8/08/2014 08:24:00 AM
nice pics! looks yummy Ayam Penyet:)